OOPS Playscheme | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Oops bu ụzọ nye ụmụntakịrị na-aga Oakleigh School na Acorn. Anyị na-agba ọsọ maka ụbọchị 14 kwa afọ, ụbọchị 4 n'oge ezumike mmiri na Eprel na ụbọchị 10 n'oge ezumike oge ọkọchị. Gwọ maka Oops bụ £ 87.50 kwa nwata kwa ụbọchị.
Ezinaụlọ nwere ụmụaka tozuru etozu nwere ike itinye akwụkwọ na Short Breaks maka ego maka Oops. Ọ bụrụ na ị na-aga nke ọma, ndị ezinụlọ ga-akwụ £ 17.50 kwa ụbọchị na Short Breaks na-akwụ ndị fọdụrụnụ. Iji tinye akwụkwọ maka oge ezumike dị mkpirikpi, biko jupụta n'ụdị ngwa ntanetị dị na ebe nrụọrụ weebụ Barnet dị mkpụmkpụ.
Anyị nwere ebe iri ise na ise kwa ụbọchị. Anyị na-enwe ọ activitiesụ dị ka nka na nka, egwuregwu dị nro, nyocha mmetụta, nkwukọrịta, egwuregwu, isi nri, egwu na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'oge a, enweghị ụgbọ njem maka Oops. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta egwuregwu egwuregwu n'ihi nke a, biko kpaliri Lorraine na lorraine.ferris@oakleigh.barnet.sch.uk ka anyị wee nwee ike ịtụle nhọrọ ndị enwere ike ịdị.